3 Ụzọ agọnahụ Chineke — njem Lee - Official Site
Ị gọrọ agọ Chineke nke Eluigwe na Ala? Nke bụ eziokwu bụ, nke a bụ otu ajụjụ dị mkpa na anyị nile na-eche banyere. O doro anya na Akwụkwọ Nsọ na ndu ebighebi n'efu ka ndị tụkwasịrị Chineke ma kwere Ya Good News, na dị nnọọ ikpe a rụrụ na ndị na-ekwu Ya. Ma, e nwere ihe karịrị otu ụzọ agọnahụ Chineke. Ebe a na-atọ m dị na New Testament.
1. Ha ekwetaghị na Jizọs bụ onye ọ sị na ọ bụ
“Ònye bụ onye ụgha ma ọ bụghị onye na-agọnarị na Jizọs bụ Kraịst? Nke ahụ bụ na-emegide Kraịst, ọ na-agọnahụ Nna ahụ na Ọkpara. Ọ dịghị onye na-agọnahụ Ọkpara nwere Nna. Onye ọ bụla nke na-ekwupụta, Ọkpara ahụ nwekwara Nna ahụ.”
E nwere ọtụtụ ndị anyị na n'ụwa taa na-eche banyere onwe ha dị ka mmụọ ma ọ bụ ọbụna ndị okpukpe. Ha kweere na Chineke dị adị, na ha anwaa ya ofufe n'ụzọ nke ha. Ma eleghị anya, ọbụna ha na-ahụ Jesus dị ka nwere onye nkụzi ma ọ bụ onye amụma si na Chineke. Ma ọ bụrụ na ha ekweghị na Jizọs bụ onye o kwuru na ya bụ, ha na-ịgọnahụ Ya.
Ịhụ Jizọs nanị dị ka oké omume nkụzi ka na-ajụ ya, ya mere ha achọghịkwa ka Chineke. Chineke gwara ndị anyị anya na Jizọs bụ Onye Nzọpụta nke ụwa na Ọ dighi-enye anyị ihe ọ bụla ọzọ ụzọ (John 14:6, Ọrụ 4:12).
Ya mere, na-ajụ Jesus na-ajụ Chineke. ma, dị ka John 1:12 -ekwu, "Ka ndị niile nabatara ya, onye kweere n'aha Ya, o nyere ikike ịghọ ụmụ Chineke.” Onye ọ bụla pụrụ ịbụ a nwa Chineke, ọ bụrụ na ha ga-ekwere n'elu Jesus.
2. Bụghị ghọtara Jesus Tupu Ndị ọzọ
“Ya mere, onye ọ bụla nke na-ekweta, m n'ihu ndị mmadụ, M ga-ekweta n'ihu Nna m nke nọ n'eluigwe, ma onye ọ bụla na-agọnarị m n'ihu ndị mmadụ, M ga-agọnahụ n'ihu Nna m nke nọ n'eluigwe.”
Ya mere, ma eleghị anya, anyị na-ekwupụta na Jizọs bụ Onyenwe obi anyị. Ma anyị ka nwere ike ịgọnahụ Ya site n'ịbụ ihere ya n'ihu ndị ọzọ. ugbu a, anyị niile kemgbe adịghị ewe ekweta okwukwe anyị n'ihu ndị ọzọ. Anyị bi a omenala na-esiwanye nnọọ obi ọjọọ kwupụta okpukpe na kpọmkwem Christianity. Ndị Kraịst na-ese dị ka morons kwere na nzuzu, -emerụ, na bigoted akụkọ ifo. Nke a nwere ike mgbe ụfọdụ edu anyị ka asụla azụ, na-ajụ ikwere na Jizọs tupu ndị anyị na-eche ga-ikwa-emò.
Nke a bụ ihe mwute. Ọ na-eme Jesus anya obere na ọ bụ a agugo nke ihe nile Ọ bụ. Ma a ga-dọrọ aka ná ntị, ma ọ bụrụ na anyị na-ekpebi agọnahụ Jesus n'ihu ndị mmadụ, Ọ ga-agọnahụkwa anyị n'ihu Nna. Na mgbe anyị na-eguzo n'ihu Chineke ma ọ bụrụ na Jizọs na-ekwu, "Ọ bụ m,” anyị na-adịghị na-na. The kwesịrị ekwesị omume na Kraịst abụghị ihe ihere ma ọ bụ egwu, ma nkwuwa-okwu na ihe ịnụ ọkụ n'obi agwa ya n'ihu ndị ọzọ.
3. ihu abụọ
“Ha sị na ha maara Chineke, ma ha ekweghị na ya site n'ọrụ ha.”
Ya mere, ma eleghị anya, n'ebe a na-adị gị ka ị na-eme mara ezigbo mma. Ị na-ekwupụtara Jesus dị ka Kraịst, na ị bụ ndị mpako na-ekwu na ị bụ onye Kraịst. My ọzọ ajụjụ maka ị bụ, "Gịnị ka ndụ gị na-ekwu?” Ọ bụ mee ka anyị iti mkpu si n'elu ụlọ n'elu "Jizọs bụ Onyenwe anyị na mụ onwe m bụ Ya eso ụzọ!” ma nwere ndị dị otú imetosi ndụ na okwu anyị na-mmiri riri si.
na Titus 1, Paul na-ekwu okwu banyere ndị ozizi ụgha ịgọnahụ Chineke site n'ọrụ ha. Ma ọ bụla n'ime anyị pụrụ isi bie ndụ n'ụzọ na-emegide ihe anyị na-ekwu. Okwukwe na Jizọs ga-agbanwe otú anyị si ebi ndụ. Ya mere, ọ bụrụ na ndụ gị anya dị ka ọ dịghị ihe agbanweela, ihe bụghị nri. Anyị agụụ ihe ọjọọ bụ a agugo nke Chineke ezi atụmatụ maka agụụ mmekọahụ. Anyị mpako bụ a agugo nke Chineke ebe dị ka center nke ihe nile. Ihe niile anyị na ha nupụrụ isi bụ a agugo nke Chineke ọrụ dị ka o ruuru ịbụ nwe-ayi nile Creation.
Ị okwu pụrụ ikweta Jesus, ma ọrụ gị agọnahụ? Ị na-ahụ n'anya ọzọ (John 15)? Ị na irubere ya isi bụ (John 14:15)? Ị na-amị mkpụrụ ka (Ndị Galeshia 5:22-23)? Ị na-ewepụta na-enye onwe gị na ihe i nwere na ndị ọzọ (2 Ndị Kọrịnt 8:1-5)? Ị na-achọ Chineke na Okwu Ya?
Ọtụtụ n'ime anyị ga-ele anya na isi ihe ndị a na-ahụ ụfọdụ n'ime onwe anyị na otu ma ọ bụ ha niile. Ọ bụrụ na ị na-eme ihere n'ihi na n'ime ụzọ ị gọrọ agọ Ya, e nwere Good News. Ọbụna agugo nke Chineke na-akwụ ụgwọ maka na cross site Jesus, dị ka anyị na-ahụ ya n'ụzọ doro anya na Pita. Ọ bụrụ na ị hapụ mmehie nke agugo, na enweta Jesus ke mbuọtidem, na mmehie a ga-agbaghara.
Na-atụkwasị obi Christ fam.
Victor • August 19, 2013 na 8:17 Abụ • zaghachi
M mkpa a. karịsịa ihu abụọ “/
Dani • August 19, 2013 na 8:18 Abụ • zaghachi
Awesome! Daalụ sir! :)
Thomas Stewart • August 19, 2013 na 8:18 Abụ • zaghachi
Wonderful post! Ọ maa kpaliri m na-atụgharị uche m omume. obere nkpu anya…amaokwu referenced na Titus kwesịrị 1:16, bụghị 2:16. Ka Chineke nọgide na-eji gị dị ike na onye nke Chineke!
William • March 27, 2018 na 2:32 pm • zaghachi
Ezigbo nwanne Chineke, M na-eji!!!
ọbịa • August 19, 2013 na 8:19 Abụ • zaghachi
M kwenyere n'ezie na Jizọs bụ nwa Chineke zigara a n'ụwa ịgbapụta onye ọ bula furu efu. Ma na na-ekwu, M ụdị a na-eme ihere onye gburugburu ndị ọzọ, na m ga-esi ihere na-elekọta mmadụ n'oge na-adịghị etinye mkparịta ụka banyere Jizọs na Gospel, ka naanị mkparịta ụka na-na-agụnye na-ekwu banyere Jizọs n'ihi na Echere m na m egwu nke ndị na-esi. Olee otú m pụrụ imeri ihe a na-atụ egwu? Ụfọdụ amaokwu nke ga-enyere?
taa • August 19, 2013 na 8:20 Abụ • zaghachi
M n'ezie na-aghọta ihe ị na-ekwu mgbe ọ na-abịa ndị mgbe mkparịta ụka na o yiri ka mgbochi Christian ma ọ bụ okpukpe n'ihi na m na-na-na a ọtụtụ ndị na agha. N'ezie nnọọ ndị ọzọ ụbọchị ya ihe mere… A isi gwara m banyere Ọbịa eke ụmụ mmadụ na ụwa na ya kweere banyere ha. Ọ bụrụ na you'r bụghị maara na a na-ele ọ na-abịa na History Channel a ọtụtụ (Ancient Ọbịa). Ọ bụ ezie na nke a n'uche bụ akpali nnọọ mmasị m, Ekwetaghị m na ọ onwe m. agbanyeghị, M na-eme ok ọrụ mgbe ọ na-abịa na-ekwu okwu n'ihi na anyị na Jehova. Mgbe ụfọdụ, m na ụjọ, mgbe ụfọdụ, m na na na, ma ihe dị mkpa bụ ikwu okwu. Ka amara ihe i kweere. Obi Ike na-eme ihe, n'agbanyeghị na anyị na-atụ egwu. Iji kpamkpam n'eziokwu, na ọgwụgwụ nke a Ihọd mere m anya mara mma nzuzu. M kpagbuo a ọtụtụ, Echefuru m ọtụtụ ihe ọmụma m nwere na azụ nke isi m, wee kpam kpam oghere. M chere na nzuzu na m n'aka na m anya nzuzu. Otú ọ dị, M mere m kasị mma na ọ maara kpọmkwem ihe m kwere n'agbanyeghị m inwe ike ime ka a oké ikpe n'ihi na ya. Nke a ka m kwere bụ akụkụ nke ịbụ a Christian; mkpagbu. Enwere m mmetụta na-amaja na rediculous, ma ọ bụrụ na ohere bịara ọzọ na-ekwu okwu banyere Chineke m ga-eme ya nile ọzọ maka alaeze n'ihi, ma i ga-adị njikere oge ọzọ o doro anya na akpa ọchị… Olileanya. Ọ bụ ihe niile banyere ndụ Chineke, na na Kraịst, anyị na-ahụ na-ebi n'ihi na Chineke anyị ga-akpagbu na harrased. Ihe dị mkpa bụ na-ebili n'ihi na Chineke. M imagin Chineke hụrụ ịhụ a ụjọ na obere nwa attemt na-ekwu okwu n'ihi na Chineke na a olu ọnọdụ, mgbe ahụ a isi theologan mechie onye ọ bụla na ụzọ ya. M na-eche otú Jizọs dị ka ndị ọzọ, mgbe ọ nọ n'elu obe. M na-eche nzuzu ga-dabara nri, n'ihi na ọ na-ekwu na ịbụ Chineke, ma ndị ọzọ hụrụ na ọ couldnt ọbụna enyere onwe ya kwụsịrị cross. O lere anya nzuzu ndị ọzọ dị nnọọ ka m lere anya nzuzu ndị ọzọ na m na na na na Captian, ma m na-eche ihe Nna chere na nke Jesus n'obe… mpako m iche.
“Atụla affraid nke ndị na-egbu ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama ike affraid nke onye nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi ma ahụ n'ime hell.”
Aleisha • December 2, 2014 na 8:52 pm • zaghachi
Hi a comment n'ezie ozi m n'ebe a na December nke 2014. M nnọọ jụrụ Chineke ka ọ gbaghara m ma nyere m aka ka ọ rụghị Ya na mgbe ọ bụla m nwere iji gosi Ọ bụ LLord M ịma otú nzuzu m anya dị ka ogologo dị ka Nna m bụ mpako, M hụrụ gị n'anya JESUS.
TonyStartk • March 5, 2018 na 8:46 Abụ • zaghachi
Rubere Thor, chi nke égbè eluigwe.
Mireyjesu • August 19, 2013 na 8:20 Abụ • zaghachi
1 Ndị Kọrịnt 1:17, Ndị Efesọs 6:18-20
ọbịa • August 19, 2013 na 8:21 Abụ • zaghachi
Daalụ, ndị na-ukwu abụọ amaokwu! M na-ekele gị enyemaka
JacobP • November 24, 2014 na 9:37 pm • zaghachi
Daalụ nke ukwuu maka nke a post! Ọ dị nnọọ na-agba ume na-ewuli elu. M ụtọ na m na nghọta si comments kwa! Chineke na-agọzi gị niile! Otuto Christ Eze nke Ndị Eze Jehova nke ndị nwenụ! <3 N'eziokwu m na a na-adọga ikenye. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him first a lot. If I did I wouldn't give in to lust. M maara na m hụrụ ya n'anya n'agbanyeghị ịbụ. Ana m ekele! Amaara m na ọ hụrụ m n'anya! Amaara m na ọ na-agbaghara m nmehie. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. Mgbe ụfọdụ, m na-eche n'ihi na m na ihere. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. N'ihi ya, m na-atụ egwu ma na-jụụ. I'm sorry I'm making such a long comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! Christ na-agbaghara! I honestly think I am a bad Christian and sometimes doubt I'm saved. A ọtụtụ n'oge na-adịbeghị ka M a na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na e lusting alot na-adị m ka m adawo. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?
Rita • December 11, 2014 na 5:17 pm • zaghachi
M couldnt kwụsị My ákwá mgbe m na-agụ whats dere n'ihi na i nwere ike gọnahụrụ Jizọs enweghị pụtara ọ na iam n'ezie ndo n'ihi m n'anya Jesus na i kwere truely na Jizọs ma na Chineke na m ga-ọzọ agọnahụ ma ọ bụ na-eme ihere na agbanyeghị. M mgbe ihere Jesus ya dị nnọọ na ọtụtụ ndị na-eme m anya nzuzu mgbe i na-ekwu banyere My belive na Chineke na-eme ka m iam dum ma ọ bụ ihe na-eme ka m ghara ịchọ ikwu okwu banyere My belive na Jizọs. WTF na-ezighị ezi m na-agaghị eme na ọzọ m kpere ekpere ka Chineke na Jizọs maka forgivness na site ugbu a m ga-agbanwe na m wont agọnahụ ya na agbanyeghị. M hụrụ gị n'anya Jizọs na Chineke na-ekele gị maka iam Christian na iam otú mpako. Daalụ Flaco na jacobp ihe ị ma dere metụrụ m n'obi nke ukwuu. Rita
Latoyah Austin • January 28, 2015 na 10:23 pm • zaghachi
@JacobP: M na na na na ọ bụrụ na onye ọzọ zara gị ogwugwu ajụjụ e nwere ma ọ bụghị. Otú ọ dị, Na m nwere obi mere ka ikwu: aṅụkwa ọgwụ, lusting, nganga, etc bụ àgwà na-abịa site ọdịdị ime mmehie anyị. Ha bụ mmehie na mmehie, nanị tinye, bụ ihe ọ bụla na-ekewa anyị na Chineke ghara. Mgbe Jizọs nwụrụ n'obe, Ọ zọpụtara mkpụrụ obi anyị. John 3:16 abịa mmụọ m. Ya mere,, unu na-echekwa Jacob. Otú ọ dị, ọrụ a na-adịghị mere b / c ugbu a, anyị ga-agba Mmụọ Nsọ re-amụ anyị –dị ka Jizọs gwara Nikọdimọs, anyị ga-mụrụ ọzọ. Ndị Rom 12:2 agwa anyị ka anyị na-kwekọọ ụwa a, ma gbanwee site uwak uche anyị. na Galeshia 5:16 na-ekwu na ọ bụrụ na anyị na-erube na Mọ, anyị agaghị na-emezu abịa nke anụ ahụ. Ya mere,, Jacob, anyị na-azọpụta; Otú ọ dị, anyị ga-now-ekwe ka Chineke na-agbanwe anyị ochie mmehie àgwà, ọchịchọ, na mindsets site na mmụọ ya– site n'Okwu Ya. Anyị na-edo nsọ, ọcha, saa site Christ (ndụ Okwu)- banyere Ndị Efesọs 5:25-26. Moral nke akụkọ bụ JacobP: Ee, unu na-echekwa. Na Jizọs hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Otú ọ dị, mmehie na ndụ gị / ndụ anyị ikewapụ anyị Ya na ndị ebe. Anyị ga-ekwe ka Okwu ya na-eme uche anyị kwa ụbọchị ma na-agbanwe anyị n'ime Ya image. Anyị chọrọ ịbụ eso ụzọ Kraịst, ọ bụghị naanị site n'okwu ọnụ na n'omume–site n'obi anyị. Chineke nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya na ị na agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ maka ezi omume –ime na anyị chọrọ n'ezie Ya? …M n'ezie anya na a na-enyere otu n'ime ụmụnne m ndị nwanyị ma ọ bụ.
Femi • February 22, 2015 na 7:32 Abụ • zaghachi
na nke a bụ egwu! gọziri a
Kerry • June 1, 2015 na 9:59 Abụ • zaghachi
My ezigbo ndị enyi Christ,
M ekpe ekpere ihe na-aga nke ọma n'ihi na unu niile. Ọ na-enye m ọṅụ ịhụ ọtụtụ egosipụta ihe isi ike nke ndụ na kwa ụbọchị siiri imeri. M nwekwara obi ụtọ ịhụ ka ndị ọzọ ume na akụkụ Akwụkwọ Nsọ na hụrụ n'anya na-aka ndị na-alụ. M na-chere na nke ọtụtụ ihe otu onye nwere ike iji mgbe na a ìgwè ma eleghị anya, aka na-anọghị ná nchebe na anyị niile na ike. Lee anya na ya otú a: na anyị niile nwere a kweere usoro n'ime anyị niile. Kwuo ihe bụ n'ezie “na ị” -achọ obi ike ma mgbe ọ na-abịa ndị mmadụ na-ekwutọ unu maka “ihe na-eme ka anyị pụrụ iche”, bụ n'ezie nsogbu gị. Atụla egwu na-ekwu na gị na-ekwu okwu iwe onye Chineke m n'anya. Ka ọ dị mfe. Anyị nwere ike ọ bụghị ihe niile dị ka Pọl, ma anyị nwere ike ịdị ka Andrew. M na hụrụ isi iyi nke ịhụnanya, Jesus. M na hụrụ ihe na-eme ka m nwee udo: Jesus! Ma eleghị anya, mgbe ndị ọzọ na-ahụ gị na udo na-ekere òkè “asịrị” ga-agbanwe ọbụna otu onye. Cheta na otuto n'ezie na anyị na-achọ bụ Jizọs, bụghị Mans> Na-elu na-agha, ọ dịghị mgbe ọ na-akawanye mfe. Ahapụ anyị niile na-eje ije ọnụ , alụ ọgụ nke ọma agha. Iji Chineke-Ebube!
Josh • September 12, 2015 na 8:13 pm • zaghachi
Nke a nyeere m aka n'ezie karịsịa ihu abụọ dị ka m bụ onye ihu abụọ ka m na-agbalị iji dozie. N'ihi a otutu maka nke a
Katie • September 18, 2015 na 5:03 Abụ • zaghachi
@latoyah Austin ihe ị dere bụ nnọọ eziokwu! Chineke na-eme anyị n'anya ma anyị na-azọpụta. @jacobp Ma anyị ga-akpa na-ekwupụtara na ọnụ anyị mmehie anyị Christ (a na-eme site nchegharị) na mgbe ahụ na-atụgharị si na anyị ụzọ ọjọọ (Ezekiel 14:6). Ịgbanwe anaghị eme eme n'elu abalị na nchegharị bụ kwa ụbọchị / mgbe niile ,ma mgbe anyị na-emeghe anyị obi ma mee ka anyị onwe anyị dị ka Chineke na-agbanwe anyị Ọ ga. M ekpe ekpere ka Jehova ga-izute gị nri ebe ị nọ nke ije na na ị ga-amalite ịkpọ mmehie asị, dị ka Kraịst na-. M na-ezisa nkwuwa okwu n'ebe unu na mgbe ule nke ịgbachitere Christ abịa gburugburu ọzọ ị ga-ike site na mo ya ikwu okwu n'atụghị egwu! Ma nyere ndị ọzọ na gburugburu gị ka ị bịa mara Christ (i nwere ike metụtara ndị ndidi ebe ị nọ). Chineke bụ a ụzọ Chineke na ọ dịghị na-emehie, ebe ihe na-aga na-ezighị ezi bụ mgbe anyị na-eche na anyị bụ chi na-agbalị ime ka anyị onwe anyị mkpebi / nhọrọ na ndụ. M na-atụ ị na-ahụ nke a na na a mma ebe a. Ọzọkwa na-agụ Baịbụl, Chineke nyere anyị ntụziaka na-esi na-ebi ndụ The New Testament (ihe niile mgbe Matthew) bụ a akwa ebe na-amalite; ka ọ na-imi na ma na-nghọta n'ihu na-akpụ akpụ na-esote ihe.
JaniceMNewton • December 7, 2015 na 10:32 Abụ • zaghachi
Na m ga-rịọ Jizọs ka gbaghara m , na ajụwo m ya na ndị ọzọ ụzọ karịa otu onye nke amaghị, mmetụta na-erughị eru maka mgbaghara mgbe ọ bụghị ihe otú ezi m, ma ọbara Jesus ẹduọk bụ karịa na-ezuru.
Justin Mkandawire • January 23, 2016 na 5:11 Abụ • zaghachi
Timmie • Ka 15, 2016 na 10:26 pm • zaghachi
Daalụ maka nke a. M na-mgbe na-achọ ọhụrụ ụzọ agọnahụ chi na isiokwu a bụ nnukwu enyemaka na-enye m na ọhụrụ nkwulu nhọrọ. The dum “Chineke dị nnọọ ọzọ mkpari akụkọ ifo mụrụ nke a ọla afọ otu na-enweghị mara na otú eluigwe na ụwa na-arụ ọrụ.” okwu na-eme ochie mgbe a mgbe. N'ihi na a oge m na-agwakọta ya na- “E nweghị ihe àmà na-abụghị nke na Akwụkwọ Nsọ odide maka akụkọ ihe mere eme na ịdị adị nke Jizọs Kraịst n'agbanyeghị ahụkebe ọrụ Alaeze Ukwu Rom mere na-edebe ihe ndekọ.” na “Ọ dịghị onye nwere na-aga azụ ka obodo a mụrụ ha na maka a onuogugu na-akwụ ụtụ isi ha. Ndị Rom gaara chọrọ ịmata ebe ndị mmadụ na-ebi ugbu a na chọrọ tax revenue e. The njem Bethlehem bụ a edemede ngwaọrụ mepụtara mgbe eziokwu nke mere na Jesus’ ọmụmụ saịtị agbakọta na gara aga amụma. Ọzọkwa, ndị Rom na-enweghị ihe ndekọ nke ọ bụla dị otú onuogugu ma ọ bụ ụtụ isi.” okwu ma ọbụna ndị na-esi ike gwụrụ mgbe ọtụtụ iri na abuo mgbe ikwughachi ha ndị na-enweghị ike esifịna na-eche onwe ha maka iri sekọnd. Ya mere, ọzọkwa, ekele unu maka inye m na ọhụrụ na-echepụta ụzọ agọnahụ ịdị adị nke ị-adịghị ahụ anya na mbara igwe nna. M n'ụzọ zuru ezu ekele maka ya!
James Ushie ago • June 18, 2016 na 5:06 Abụ • zaghachi
Ahụrụ m nke a n'anya; Mmehie Anyị Nwere Iji Amead Anyị Ụzọ.
Lmrhs • August 14, 2016 na 5:30 Abụ • zaghachi
Timmie : “The njem Bethlehem bụ a edemede ngwaọrụ mepụtara mgbe eziokwu” … n'ezie ? Ị n'ezie kwere nke a ? Nanị otu ajụjụ, 4 okwu … “ihe ma ọ bụrụ na ị na-na na na-ezighị ezi”.
Emily O • September 15, 2016 na 12:25 pm • zaghachi
ihe ma ọ bụrụ na onye a na a Christian ha dum ndụ, e mere ya baptizim, hụrụ ọrụ ebube eme, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbe agha ụgha ka onye na-ekwu “Agaghị m asị na m Christian ma m kwere na a elu”.. Chineke ga-agbaghara ha?? ma ọ bụrụ na ha n'ezie na-eche na jọgburu banyere ya ma chegharịa?
Sean • September 24, 2016 na 10:15 pm • zaghachi
Ee ọ ga-. Chineke na-aghọta adịghị ike anyị. Na onye dị nnọọ mkpa iji na-unashamed nke Gospel. Chineke na-ele ihe nọgide na-amụba, bụghị ozugbo okè.
Brucid • October 14, 2016 na 5:19 Abụ • zaghachi
Ịgụ akwụkwọ 2 KỌR 5:17-19
Chineke na-adịghị na-agụta mmehie nke ndị mmadụ.
Gụọ 1 JOHN 1:9 nwekwara.
aha: 6 nke 3.14 – Ikpeazụ akwụkwọ mposi Roll
Dennis • November 10, 2016 na 1:17 Abụ • zaghachi
Echere m na m Anụla agọ Jeseu site n'ọrụ m (ihu abụọ) ma-ekele Chineke maka ihe ndị mejupụtara na cross.
Larry Johnson • January 15, 2017 na 1:18 pm • zaghachi
Ịchọ Eziokwu. ekele
Daniel • February 15, 2017 na 1:15 Abụ • zaghachi
Daniel • March 24, 2017 na 8:20 pm • zaghachi
Marsha • April 8, 2017 na 4:14 pm • zaghachi
M Christian na uche m we na ebe m malitere na-eche echiche na-ezighị ezi nke Chineke na-eche na ọ na-eziga m ka m na ọ ga-o ga-chere ga-akwụsị ya mere m chere na ọ bụ site na ya na-ezo m kweere aga n'ebe ahụ ma na-egwu Chineke ime azụmahịa na onwe na mgbe obi tara mmiri obi megide Chineke na ekpe okwukwe. Thenot Chineke m nke ezinụlọ na Jizọs kwuru thru ozi ikewapụ anyị na Chineke ugbu a na mgbe ebighị ebi. Achọrọ m na-enweta ha azụ dị ka onyenwe nke ndụ ma na ha bụ ndị na-adịghị njikere ime m azụ. Help biko
Rickylee • April 20, 2017 na 7:28 Abụ • zaghachi
M Jesus Christ; M a Bible kwere ekwe, M ekwupụta Ọ bụ eze ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ!
OdioEmmanuel • Ka 7, 2017 na 3:33 Abụ • zaghachi
Ka aha ya otuto ruo mgbe ebighị ebi
JaketaFenner • Ka 13, 2017 na 10:55 Abụ • zaghachi
Hi ladies! Jizọs bụ Onyenwe anyị! Jesus agbanwewo ndụ m gburugburu, M agaghịkwa a masturbater, cutter(mmerụ ahụ nke onwe), emegbu, mîkasuaha, na ihe niile adịghị amasị m onwe m. Ọ na-ewe otutu n'ihi na ụfọdụ ndị na-ekwu banyere ihe m kwuru, Ọ dabara nke ọma, m Ọ bụghị n'ihi na Chineke na-agbaghara m nmehie nile ndi a na m ihere ịgwa onye ọ bụla n'ihi na ọ bụghị ọ bụla na niile m na-ekwu ya na m na-achọghị m na nzuzo na-enwe a ịsụ ngọngọ onye. M ga-achọ ka ndị mmadụ anọgide na-eji Jehova n'agbanyeghị ihe ọ na-ewe ma na-arịọ ya ịnapụta gị mmehie ọ bụla nakwa na ị ga-aghọ uche Jehova! Daalụ, Chineke maka ebere na amara! isiokwu a (3 ụzọ ekwu na Chineke) bụ nnọọ aka n'ihi na M na-achọgharị na google on “otú m nwere ike ikweta na Jizọs ndị ọzọ” n'ihi na m chọrọ ka ndị mmadụ mara Jizọs bụ Onyenwe anyị karịrị ihe ọ bụla na m chọrọ ime ihe na ọzọ n'ihi na Jehova na nke a bụ otu n'ime ụzọ kacha mma. M ihere nke Jehova na m ga-ejere ya ozi ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ndụ m ruo mgbe m laghachi n'ájá. Nwere a oké ụbọchị na m anya na a post aka onye si n'ebe! E nwere ike na aha Jesus, Daalụ Jehova!
Lori • June 18, 2017 na 7:14 pm • zaghachi
Olee otú i nweta mgbaghara maka ịgọnahụ chi?
Gaby • October 11, 2017 na 7:53 pm • zaghachi
NormanBerry • October 15, 2017 na 10:21 Abụ • zaghachi
Na nzaghachi Jacob. M nnọọ na-ekwu ma na m na-adịghị na e dere akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị ka m ugbu a. Ma o yiri ka ọ bụrụ na ị na-adọwa n'etiti Mmụọ Nsọ na ihe nke ụwa a. M na ọ bụghị buru na i na nke a bụ nnọọ ihe na-anwụ anwụ Nigeria nke Gods e kere eke nile na ahụmahụ. E nwere amaokwu Akwụkwọ Nsọ ebe a nwoke ịjụ Jesus ihe ọ ga-eme ka a zọpụta na Jizọs gwara ya ka “agọnahụ onwe gị, weghara gị cross , na-eso m.” Nwanna, na di arọ! M maara ebe ahụ n'akwụkwọ Mark Jizọs kwukwara “na ọ bụrụ na ị na-adịghị ebuli gị cross na-eso m na ị bụ ekwesịghị m”. Ọ dị m ka m na-eme na? Na m na-anwụ anwụ agwa m emela. Dị ka m mụtara nke Akwụkwọ Nsọ na-enwe a ghọtakwuo banyere ịhụnanya nke Chineke na àjà o mere na-eke anyị na mgbe ahụ ka anyị a nnwere onwe ime nhọrọ nke ị na-ahọrọ ya na ụzọ ya ma ọ bụ na mgbe ahụ na-enwe Ọkpara ya na biri a efu ndụ na anyị ka anyị kpuchie naanị ka ya ahụhụ ọnwụ n'ihi na nke ndị mgbe anyị na-adịghị agbaso Chineke, mgbe ahụ, m kweere na ọ bụ uru ọ m na-eso ihe O nyere iwu. Ebe ọ bụ na m weere ntụziaka Jizọs na etinyere ya m kwa ụbọchị ndụ m agaghịkwa na-eche a aja nke ụwa a na ndụ. M chere na m nwere nzube ná ndụ, nakwa na m akụkụ dị mkpa nke ndụ a bụ ezie na ọ pụrụ iyi obere. Chineke agọziwo m na mmụta na m ga-amasị-asị na ụbụrụ na-aghọ na sayensi gosi a Chineke kere. Nke a Okike na ọ bụghị nanị na-agaghị emeli nke a nke pụrụ ịnwụ anwụ dị ka anyị bụ ma ọ bụ bụ Chineke kere eke onwe ya. Ka anyị a anya Einstein. Ọ dị mwute na ọ na-apụghị-atụrụ ime na a Chineke ike na ike na ihe niile na-adị, ma Einsteins Nchoputa gosiri na niile okwu na-mere si ike. Energy bụghị a umi ma ọ bụ ikike. Ya mere, olee mgbe ahụ nwere ike a ike ike iche kpụrụ n'ime bekee na ụfọdụ n'ime ndị bekee ibu a ndụ e kere eke. E nwere ndị na-egosi na e nwere Chineke nke eluigwe na ala na anyị na-adịghị naanị ekpe na-ata ahụhụ ma na-anwụ n'efu ebube. Chineke nwere atụmanya dị elu nke anyị. Nke a ndụ bụ a ule na anyị ga-ifọnke na ntuziaka Ọ nyere anyị.
Julia • November 1, 2017 na 1:33 pm • zaghachi
ha ha na ọ dị otú mara mma masịrị m n'ezie na m hụrụ ya n'anya na-ekele gị nke ukwuu maka nke a okwu Chineke na-ekele gị
Mathew • November 14, 2017 na 8:20 Abụ • zaghachi
Daalụ na ụmụnna a post. Mgbe ọ bụla m na-akpagbu / emegbu(a malitere na-eme nwata n'ihu) M malitere ịkpọ aha JESUS. N'ihi ya, ọbụna mgbe a mụrụ ọzọ , M ịgọnahụ Ya ma obu site na otu nke atọ kwuru na posts. Ọbụna mgbe nkwupụta, na obi m na e nwere ịkpọasị kwupụta aha Jesus ezie na m chọrọ na-eso Ya na Ya n'anya. M na-alụ. Ọ bụ ya mere m malitere ịchọ otú ikweta na aha Jesus ma ọ bụ otú pụta si ịgọnahụ Ya. M hụrụ nke a blog na website. Daalụ maka na-ekere òkè. Nwere ike ị biko ekpe ekpere m iji weghachi mbụ m ịhụnanya Jizọs Kraịst na-erube na ịhụnanya Ya ọbụna site ahụ, spirit, mkpụrụ obi na mmetụta uche nke mere na agaghị m agọnahụ Ya ruo m ọnwụ ma ọ bụ Ya nke abụọ ọbịbịa ?
Mack • February 3, 2018 na 8:20 pm • zaghachi
M na-eche na Chineke bụ ihe ndị ọzọ nwere mmasị ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ n'anya na onye agbata obi anyị karịa ihe ọ bụla anyị na-eme speechs. The nwaanyị instrumental na m akakabarede bụ nnọọ n'anya ma na ọ ga-mgbe niile enye Chineke otuto, ma ọ ga-mgbe niile dị nnọọ na-atụle ya dị ka ihe na-ọ na-agachikwa adọta. MA, nnukwu influencer bụ otú ahụ n'anya ọ bụ. Na m na mbụ ndụ dị ka ọ bụ onye, ndị mmadụ kwuru nwere nnoo dịghị mmetụta na m. Ọ bụ ha na-eme. Lee ka ịhụnanya ha, otú ọmịiko, otú ịnakwere. M na-eyi a Cross on a n'ezie obere yinye. (Funny akụkọ. M nyere iwu a ogologo yinye na mail ka m Cross ga-ezo nke na m ga-bụghị "mejọọ". The Cross na rutere mail "na-ezighị" bụ mkpumkpu karịa ihe m nwere tupu! Nwetara ozi Jehova!) N'ihi ya, m na-eyi na obere yinye na onye ọ bụla nwere ike ịhụ m Cross niile. Ma ajụjụ dị oké ugbu a bụ, m na-ahụ n'anya. Otú m si emeso onye ọ bụla dị ka a hụrụ n'anya na nwa nke Chineke? Na anyị agọnahụ Jesus site n'ileghara agụụ na-agụ, onye mkpọrọ, -enweghị ebe obibi. Jizọs kwuru ọcha ime iko na ndị fọdụrụ ga-elekọta ma ọ bụrụ na ya onwe ya. Ọ mere na-amasị ndị mmadụ na-eme ka ogologo ekpere ka iyi nsọ karịa I. Ọ bụrụ na anyị nwere ịhụnanya Kraịst na obi anyị na-arụ na-ahụ n'anya na-eme, anyị na-ekwusa Jesus
Mack • February 3, 2018 na 10:15 pm • zaghachi
Banyere Jacobs na na-anyị ka mmehie? The Bible jupụtara akụkọ nke mgbaghara. Lee anya na David mehiere na emehiewo na emehiewo. Lee anya na Pita gọnahụrụ Jizọs 3 ugboro na e mere na isi nke Church. Ị bụ ugbu a nwa Chineke. Ndi a ọma nne na nna-ahapụ nwa ha nanị n'ihi na ha na-anụ ntị? Ọ bụghị n'ezie. Nke a bụ nwa gị. Olee ihe ndị ọzọ Nna anyị nke eluigwe. Ọ bụghị ajọọ Jesus megidere nke ukwuu dị ka ndị mpako. Chee echiche nke Pharisee na-ekpe ekpere, Jehova na-ekele gị maka na ọ na-eme ka m na-enweghị ka mmehie a ọnaụtụ. Ọ na-echekwa. Ma ndị dị umeala ọnaụtụ na-eti aka n'obi-ya, Jesus mfe gbaghaara. Na m ekpere ndụ, M na-enwe na Chineke hụrụ anyị n'anya nnọọ. Na o yiri ka ọ na-elekwasị anya na ihe anyị na-eme nri kama na-ezighị ezi. Na ọ bụ nnọọ umeala n'obi (anyị na-ekwesịghị-anya. O kpebiri ka a mụọ ya na a etinyere anụ ụlọ nri na-ebi ndụ a ndụ nke ịda ogbenye). Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụ ya mere ekele mgbe anyị ahọrọ na-eji oge ha na ya na-ekpe ekpere ma na-achọ uche ya. Ọ maara na anyị bụ ndị free na-achọ ya. Ya mere, mgbe anyị ji ezi obi na-achọ ya na ọ bụ ekele ma na-eji mgbalị anyị. Ọtụtụ oge, anyị bụ ndị na-asọ Chineke anya n'ihi na anyị na-eche na ọ dịghị onye nwere ike hụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Gbaghara anyị na ọtụtụ. Ma ọ bụghị a tit maka tat Chineke. All ndị ọrụ ụgwọ ọnwa otu ma ha na-arụ ọrụ niile ụbọchị ma ọ bụ nanị ke akpatre hour. Ọ dị njikere mgbe nile Lavish ị na ịhụnanya ya, ma ọ bụrụ na naanị na ị ga-ekwe ka ya.
mynee • February 22, 2018 na 10:54 pm • zaghachi
daalụ n'ihi na ihe niile
Carla Charles • March 6, 2018 na 2:48 pm • zaghachi
Ịmara na m mehiere bụ na àgwà ọjọọ. Ndịozi-enye anyị olileanya, site na Kraist. Mgbe m na-ụtọ na pecuilar.
Nixar • Ka 4, 2018 na 1:09 pm • zaghachi
M atụmatụ ịkọrọ a ka ibe m ndị na-efe ofufe otu dị ka ndụmọdụ anyị devotions tupu anyị omume.
Ma m chere na ikpe mara banyere ndị a stof. M pụtara na a ka nwere ihe m kwesịrị ichegharị– na na na-m agugo pf Ya unnoticeably mgbe ụfọdụ.
Nna biko gbaghara m nke a mmehie na-eduga m gị nile nke ezi omume. Amen.
Joe • Ka 24, 2018 na 7:51 pm • zaghachi
Ihe m mgbe niile na-ekwu mgbe onye na-amalite ikwusa ozi ọma niile bụ Ndị Kraịst bụ ndị nzuzu & otu ụbọchị, anyị niile ga-aghọta na ọ bụ ihe dị nnọọ a nrọ…
Ọfọn ọ bụrụ na gị otú nri ( nke m na-adịghị kwere na ị na-) Anyị Kraịst bi & hụrụ n'anya ihe anyị kweere .
N'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ na ihe anyị na Kraịst kweere bụ eziokwu
(Nke m kwenyere n'ezie na ọ bụ Chineke bụ & Ọkpara ya bụ Jizọs bụ ezigbo)
Anyị niile ga-ahụ ya mgbe ụbọchị na-abịa. Na ụbọchị ị ga kwere, ma ọ ga-abụ akaha n'ihi na ị. M Ka m Case.
N'ihi ya, chee banyere ya.
Catherinemeadows • June 13, 2018 na 9:41 pm • zaghachi
M na-eche otú ihere na i agọ chi akpata i e n'ịta ya ụta maka m moma maka ọnwụ na im eme ihere ịgwa onye ọ bụla na im egwu ha na-aga aruge na m ma ọ bụ m okwu wont pụta nri ma i n'anya nwanne m nwoke Jizọs chirst na m eluigwe nna m kweere na Chineke zitere Ọkpara ya ka nwụrụ n'elu obe n'ihi mmehie anyị na m kwere na ya im azọpụta ma i mee ya baptizim na i kwere na ya okwu ma i na-etinye ya mbụ m chọrọ enyemaka iji nweta m scaredness na affarid na ihere nwere ike yall aka m na-ekele gị nke ukwuu maka na achọrọ m ya nna ma ọ bụrụ na i mgbe gọrọ n'iru nke omume m na-im ndo nna PLS gbaghara m hụrụ gị n'anya na Jizọs aha amen
Robert • November 17, 2018 na 6:25 pm • zaghachi
Olileanya a na-enyere Catherinemeadows
M nyere gị iwu? Dị ike, nwee obi ike; atụla ụjọ, atụkwala ujọ, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị nọnyeere gị ebe ọ bụla ị na-aga. " (ahụ Bible, Joshua 1:9)
taa, Jehova kwuru na ị, "Nwee obi ike!"
"O wee sị, "O nwoke ukwuu hụrụ n'anya, atula egwu! Udo gị; ike, ee, ike!"Ya mere, mgbe ọ gwara m na m nọ ike, na kwuru, "Ka Onyenwe m na-ekwu okwu, n'ihi na i sie ike m. "" (ahụ Bible, Daniel 10:19)
Na-obi gị nsogbu? Nwee obi ike…bụ Chineke gị ebe a!
Onye na-enye anyị udo na-enye ya ka anyị kpamkpam.
Ndị na-anya ha dịrị Chineke na-aga banyere ya azụmahịa ike na Ọ ga-elekọta ha.
Ọ bụ onye na ruo eruo ndị Ọ na-akpọ.
Ọ bụ onye na sụgharịa ikpe ziri ezi.
Ọ bụ onye na-enye.
The Otu onye gwara gị nwee obi ike dị ike karịa ihe na-na-akụda gị.
The Bible na-ekwu, ọzọ, "Ma ugbu a,, otú a ka Onye-nwe , onye kere gị, A Jacob, Na Onye kpụrụ gị, O Israel: "Egwu, n'ihi na m gbapụtara unu; M na-akpọ gị n'aha gị; Ị bụ nke m. Mgbe ị gafee mmiri, M ga-anọnyere gị; Na site osimiri, ha agaghi-erubiga ị. Mgbe ị na-eje ije site na ọkụ, ị ga-ọkụ, Ma ọ ga-ire scorch gị. "" (Isaiah 43:1-2)
Nwee obi ike,, Catherine. Ndị gbara ya gburugburu ike ị gaghị ama na ị na, ma Chineke na-akpọ gị n'aha gị ...! Ị na-Ya. Ọ bụ na ị na-, ọbụna site ọkụ nke na-ekpe ikpe. Na Ya site gị n'akụkụ, ị ga-adị naanị. Nwee obi ike!
Nke a na saịtị na-enyere m A ọrụ ebube ọ bụla ụbọchị Jesus.net
Tina Olafusi • December 5, 2018 na 11:43 pm • zaghachi
N'ihi a otutu sir, ya n'ezie na-eme m ka m marakwa ebe m na Jehova nke i nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ maka nzọpụta m.
Ka • January 26, 2019 na 5:04 pm • zaghachi
Ronald • Ka 3, 2019 na 10:46 Abụ • zaghachi
Joseph Sabiiti • June 17, 2019 na 9:25 Abụ • zaghachi
Tracy • June 23, 2019 na 11:58 Abụ • zaghachi